Inkampani Kufanele Ingene Kanjani KumaSocial Media? | Martech Zone
Inkampani Kufanele Ingene Kanjani KumaSocial Media?
NgoLwesine, Agasti 21, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Le yingxenye 2 yochungechunge lwezingxenye ezi-3. Ingxenye 1 ibikhona Inkampani Kufanele Ingene Nini Ezinkundleni Zokuxhumana? Uxolo ngokubambezeleka kulokhu okuthunyelwe, kube yisonto elikhulu emsebenzini - amaphrojekthi ama-3 asezophela, omunye wabo ukwedlula unyaka ukwenziwa!
Ngiphinde ngamisa isikhashana ngoba kube nengxoxo enkulu maqondana nokuthunyelwe kokuqala, ikakhulukazi kufayela le- okuthunyelwe kusuka kubantu baseDeep Tech Dive:
Kepha ngiyakungabaza ukusho kukaDoug ukuthi kufanele kuqala? Ubandakanye bonke abaholi enkampanini yakho? labo abanamasu enhlangano.? Mhlawumbe i-Indianapolis ikwiplanethi ehlukile (uJeff, ungowaseKentucky, ucabangani?) Lapho ithimba eliphezulu linesikhathi nokuqonda kwezokuxhumana ukuze kufinyelele kumbaya. Kepha lapha, indlela esheshayo yokubulala uhlelo olusha lwezokuxhumana ukulugcina lubanjelwe ekuvumelaneni kwezinga eliphezulu. Hhayi ukuthi ukuvunywa kobuholi akubalulekile, kepha ukuthi cishe akunakwenzeka ukukufeza, ikakhulukazi NGAPHAMBI kokuba ukhombise noma iyiphi i-ROI kakhonkolo.
Kungenzeka ngiphuthelwe umaki kulokhu engikuthumele: Angikhathazekile ngokuba nesinqumo sokuvumelana ezingeni lebhodi. Engikukhathalele impela ukusiza ubuholi benkampani ukuthi buqaphele amathuba nezicupho ezizovela ngokuvula ibhizinisi lakho kuze kufike kuleli su. Umbhali uyaqhubeka:
Isu lokuqalisa elincane kwesinye isikhathi lisebenza kangcono, ngezindlela eziningi. Konke okudingayo ngumbhali oyedwa ohehayo, amanye amathuluzi angabizi kakhulu, nenkinga eyodwa yokuxhumana ongayikala. Mhlawumbe kuyisisekelo njengokuthola ithrafikhi ethe xaxa kuwebhusayithi yakho. Noma ukuqwashisa ngezinto ezintsha zokuxhasa nezinhlelo. Noma ukwandisa intshisekelo yamakhasimende ngokutshela ama-anecdotes athakazelisayo mayelana nokuthi abantu bangempela bayisebenzisa kanjani imikhiqizo noma izinsizakalo zakho.
Yize ngivuma ukuthi lokhu kuzonikeza inkampani yakho ukuqala okusheshayo futhi kungabi nesikhathi esanele sokuya 'ekomitini lomgodi omnyama', ngibonile ukuthi le ndlela inemiphumela emihle nemibi. Mhlawumbe isibonelo esihle kakhulu engisibonile saleli qhinga bekungumngani UChris Baggott's blog on Izenzo Ezinhle Zokuthengisa Nge-imeyili. Vele, uChris wayenethuba lokuba bobabili umnikazi kanye noChief Marketing Officer weExactTarget, ngakho-ke kwakulula kancane ukweqa emuva ngaleso sikhathi.
Umbuzo akukhona ukuthi ibhulogi kaChris ibinomthelela yini. Kwaba nomthelela omangalisayo! Umbuzo uthi ngabe lifinyelele amandla alo ngokugcwele noma cha futhi laba nomthelela ebhizinisini, enhlanganweni yonke, ukuthi ayengakwenza unayo. UChris uhambe I-ExactTarget ukuqala I-Blogware yokuhlanganisa (Ukuzikhulula: Ngisize uChris ukuthi athuthukise umqondo wokuqala) ngoba naye wakubheka lokhu!
UChris wafunda izintambo zokubhuloga iminyaka eminingana kuTypepad. Ngesikhathi uChris eqaphela amandla ebhulogi ku-Search Engine Marketing, ukuhlanganiswa, njll., Kwase kwephuze kakhulu ukuphuma I-Typepad futhi usebenzise ngokugcwele indawo yokubhuloga. Wayexhunyaniswa yonke indawo (usengu- # 1 ka- Izenzo Ezinhle Zokuthengisa Nge-imeyili“. Kwakuneminye imibandela eyishumi nambili uChris ayengathanda ukuthi ihlotshaniswe nayo ekukhiqizeni i-ExactTarget, kepha wayengenayo indlela yokuqonda ukuthi usuku avele wagxuma ngalo waqala ukubhuloga. Futhi ubengathanda ukuba nabanye abantu kubhulogi lenhlangano futhi - ukuhlanganisa umthelela.
Ngubani Okutshela Kanjani?
Yingakho ngingummeli omkhulu kangaka wokuthola abaxhumanisi abalungile beSocial Media bebhizinisi lakho. Umxhumanisi omkhulu angabuyekeza amathuluzi akho, ibhizinisi lakho futhi athole amathuluzi afanele azongena kucebo lakho. Abacebisi bezindaba zenhlalo yasendaweni bayazi futhi ngemithombo yezokuxhumana - futhi bangakusiza lapho ukwenza isu lakho, hhayi nje ukuthi kanjani.
Umuntu wakho we-IT angaba nayo WordPress isebenza ngemizuzu emi-5 (ukufaka odumile ngokuchofoza okungu-1). Ngabe lokho kusho ukuthi uyazi ukuthi angayakha kanjani itimu yakho yabakhasi bezinjini zokusesha? Ngabe uyazi ukuthi angawahlela kanjani ama-permalinks nezihloko zekhasi ukuze kube nomthelela omkhulu? Uyazi ukuthi yimaphi ama-plugins okumele abe nawo? Cha, akakwenzi - uma kungenjalo uzobe eqhuba ibhulogi ephumelelayo, ekhuluma futhi ebonisana nohlangothi. Lesi ngesinye sezindawo lapho ungakhohliswa ngokuphelele yi-Open Source spirit.
Ngiyawuthanda Umthombo Ovulekile! Ngiyayithanda i-WordPress! Ngingayisebenzisa yini ukuqala isu eliphelele lezokuxhumana lenhlangano? Cha. I-WordPress wuhlelo lokulawulwa kokuqukethwe olumbhali, hhayi uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe kwenkampani okuyisisekelo.
Ngubani Izwi Lenkampani Yakho?
Imvamisa, umnyango wakho wokukhangisa akuzona izinsiza zakho ezinhle kakhulu zokwenza isu lezokuxhumana. Abakhangisi bayisigejane esibukhali. Sicabanga ngezinyawo zethu futhi sivame ukuba necebo lomkhiqizo jikelele lapho sikhuluma. Uma ufaka inethiwekhi yokuxhumana nabantu bese uqala ukulingisa amagama ngokuvamile kubekelwe i-BS Bingo, kuyazenzakalela F. Uma ungacelwa ukuba uhambe, zilungiselele ukuthi inkampani yakho ihlushwe esidlangalaleni ngokwephula umthetho obalulekile wezokuxhumana - ukwethembana.
Kunabantu enhlanganweni yakho njengamanje abakhe ukuthembeka, igunya, kanye nenethiwekhi enkulu embonini yabo. Labo yizixhumi kanye nabathonya okudingeka ubasebenzisele isu lakho!
Ungadli Kanye Nje!
Iphuzu lokugcina lokuthi ungaqala kanjani. Sicela ungabeki konke ukwethemba kwakho 'kuchwepheshe' oyedwa. Isazi yigama elihlobene, ikakhulukazi maqondana nemithombo yezokuxhumana. Izinkampani zisanda kukha phezulu manje ukuthi ungayisebenzisa kanjani le ndlela emangalisayo ukwakha ubudlelwane nokutholakala kwezinkampani zabo. Qaphela amagama adlulele njenganoma yinini, bonke, akekho, wonke umuntu… isu ongabhejeli ngalo kungenzeka kube yilona elikutholela iwini yakho enkulu.
Thola abeluleki bezokuxhumana abambalwa, abantu abangaqonda ibhizinisi lakho, imboni yakho, amasu akho wokumaketha, ukutholwa kobuchwepheshe bakho nokuthi ngubani ongafundisa iqembu lakho lobuholi ngale ndlela entsha ekhangayo.
Inkampani Kufanele Ingene Nini Ezinkundleni Zokuxhumana?
Kwesinye Isikhathi Awukwazi Ukulungiselela Ngokwanele
Dec 15, 2008 ngo-3: 41 PM
Doug, siyajabula ukubona esinye isitolimende sochungechunge lwakho. Siyabonga ngokuxazulula ukukhathazeka kwethu mayelana nokuvumelana kwabaphathi. Siyavuma ukuthi ochwepheshe babalulekile ekugwemeni amabhomu agqitshwayo kanye namathuba okubona. Isihloko esihle sesixuku sethu sobuchwepheshe obujulile, ngakho-ke sinjalo siqhubeka nokuhlanganisa kwethu lolu chungechunge ngaphezulu kuMcBruBlog. Silangazelela ingxenye 3! - UDavid